Midowga Culumada caalamka Islaamka oo ka tacsiyeynaya dilkii Fadiilat Sheekh C/qaadir Nuur
Qadar:-Midowga culumada Caalamka Islaamka oo uga tacsiyeynaya dunida Islaamka geeridii Shiikh C/qaadir Nuur Faarax raximahulaah oo lagu dilay magaalada Garoowe gudaha Masjidka Al-Bader xili uu ku ji
Golayaasha Jamciyadda Al-irshaad ee UK waxay soo saareen Bayaan ka kooban Tacsi iyo Baaq.
London:-Ka dib fadhi ay yeesheen Golayaasha Jamciyadda Al-irshaad ee UK waxay soo saareen Bayaan ka kooban Tacsi iyo Baaq. 1-Jimciyaddu waxay tacsi u diraysaa dhammaan Eheladii Sh.C/qaadir Nuur Faa
Sheekh Cali Maxamed Saalax oo tacsi u diray Ehelada Sh C/qaadir Nuur Faarax
Sheekh Cali Maxamed Saaalax oo ka mid ah culumada Soomaaliyeed ahna Sheekh Masjidka Al-Tawfiiqa ee magaalada Oslo ee xarunta dalka Norway ayaa tacsi u diraya eheladii iyo Qaraabadii iyo umadda Islaa
Markazka Al-Tawfiiq Oslo oo tacsi u diraya eheladii Sheekh C/Qaadir Nuur Faarax
Oslo:-Maamulka markazka Altafwiiq ee magaalada oslo ee xarunta dalka Norway iyo dadweynaha TIS Oslo,waxay tacsi tiiraanyo leh u dirayaan dhammaan ehelada shiikha, culumada somaliyed, asxaabtiisa,
Boosaaso:-Sheekh C/qaadir Nuur Faarax raximahulaah ayaa kalimad dardaaran ah jeediyey ka dib dilkii Dr.Ahmed Xaji C/raxmaan waxaana uu kalimadaas ka jeediyey Nadwo ay culumada ku qabteen Masjidka Al-R
Culumadii ka soo qeybgalay aaskii Sh C/qaadir oo la kulmay madaxda sare ee Puntland
Garoowe:-Waxaa maanta duhurkii kulan wada qaatay dhamaan culumadii iyo waxgaradkii ka soo qeyb galay aaskii Sheekh C/qaadir Nuur Faarax iyo madaxda Puntland oo ay horkacayaan Madaxweynaha dowllada Pun
Culimada Soomaaliyeed ee dalka Kenya oo maanta bayaan ka soo saaray dilkii Sh. C/qaadir Nuur Faarax
Nairobi:-Culimada Soomaaliyeed ee dalka Kenya ku dhaqan, ayaa bayaan ka soo saaray dilkii Sh. C/qaadir Nuur Faarax, bayaanka oo nuqul ka mid ah uu na soo gaaray ayaa u qornaa sidan:- TACSI IYO CANB
Tafsiirka Suuratu Al-Baqara ayadah 92 ilaa 105 Sh. Dr. Cali Maxamed Saalax (Daawo)
Norway:-Waxaan idiin soo gudbineynaa darsigii Tafsiirka Qu,aanka uu Sh. Dr.Cali Maxamed Saalax uu ka bilaabay Masjidka Al-Tawfiiq ee magaalada Oslo ee xarunta dalka Norway.Sh.Dr.Cali Maxamed Saalax
Sheekh Shible oo sheegay in Sheekh C/qaadir ay dileen Alshabaab iyo Xasaan (Dhageyso)
Jigjiga:-Sheekh Maxamuud Shible oo ka mid culumada Soomaaliyeed ayaa ka hadlay dilkii Foosha xumaa ee loo geystay Sheekh C/qaadir Nuur Faarax waxaana uu Sheekh Maxamuud Shible Sheegay in dilka Sheekh
Culimada ina Godane beegsaday Xasaanna fatwooday dilkoodu waa kuwo noocee ah ?
ALLAAH ayaa mahad oo dhammi u sugnaatay .Wakhtigan oo kale oo murugtu aad u badan tahay waxaa dhici karta in sidii aad wax u doonaysay aadan u qori karin , haseyeeshee waxaan isku dayayaa inaan akhris